विराटनगर पुगेर प्रचण्डले भने – महासचिव र म हलगोरु जस्तो::Online News Portal from State No. 4
विराटनगर पुगेर प्रचण्डले भने – महासचिव र म हलगोरु जस्तो
ओलीजी र म झ्याप्पै मिल्यौं, नेता भनेको यस्तो हुन्छ क्या !
सबै नेता कार्यकर्ताले भोट पचाउन सक्ने क्षमता बृद्धि गरेको भए त हुन्थ्यो । तर, यति धेरै भोट आयो, आँखा देख्नै छाड्यौं । यति मनोगत र यति अहंकार आयो, यति धेरै भोट आउने रहेछ । प्रचण्ड अलि अडेको भए त क्रान्ति नै सम्पन्न हुने रहेछ नि, प्रचण्डले दक्षिणपन्थी बाटो लियो भन्ने निक्ले त्यहीँभित्र । प्रचण्डले गर्दा यति भोट आयो भन्नुपर्ने ठाउँमा प्रचण्डले बाटो बिराएर यतातिर यस्तो आयो भन्ने निस्के त्यहीँभित्र । अर्कोतिर एमालेमा के बिचित्र भयो, कहाँ गडबड भयो भनेर रुवाबासी शुरु भयो । कुन होटलमा गएर रुनुभयो भन्ने पनि थाहा छ मलाई । यत्रो नेकपा माओवादीलाई २२३ सिट कम हो त ? एमालेको ३३ सिट ।
१४ वर्ष काराबासमा केपी ओलीजी बस्नुभयो । उहाँको १४ वर्ष काराबास बसेको मनोविज्ञान पनि छ । १४ वर्ष म पनि वनवास बसेँ । मेरो पनि मनोविज्ञान छ । यो १४ वर्षको काराबास र वनबासले हामीलाई यो ठाउँमा ल्याएको छ । अब माओवादीको ठाउँमा एमाले, एमालेको ठाउँमा माओवादी । ०७० सालको चुनावको परिणाम भनेको हो मैले । ठीक उल्टो भयो क्या । मैले बडो सैद्धान्तिक कुरा भनेको छु है कमरेडहरु, ख्याल होइन । व्यवहारिक घटनामात्र भनेको होइन । यसले नेतृत्वलाई र कार्यकर्ता सबैलाई जमीनमा टेक्ने बनाइदियो । एमाले पनि जमीनमा, माओवादी पनि जमीनमा ।
सबै जनताको बीचमा टेकेर हामीलाई आफ्नो हैसियत के हो भन्ने बुझ्ने बनाइदियो । लामो संघर्षले घटनाक्रमले उतार-चढावले हामी सबैलाई अलि परिपक्व बनाइदियो । अलि व्यवहारिक पनि बनाइदियो । अलि विवेकशील पनि बनाइदियो र अबचाहिँ हाम्रो अगाडि विकल्प संविधान मिलेर बनाउनुको छैन, सरकार मिलेर बनाउनुको छैन र पार्टी एकताको विकल्प छैन भनेर सोच्नुपर्ने ठाउँमा नेतृत्वपंक्तिलाई ल्याइपुर्‍यो । मैले भन्ने गरेको थिएँ, ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि पार्टी एकताको एउटा पृष्ठभूमि बनेको थियो । त्यतिबेला नेकपा एमालेको निर्माण र नेकपा एकताकेन्द्रको निर्माण एउटा कालखण्ड थियो । कमरेड मदन भण्डारीको विशेष सक्रियता र पहलमा बनिएको एमाले र मेरो विशेष सक्रियतामा बनेको नेकपा एकताकेन्द्र दुईधार अगाडि आएका थिए ।
कमरेड मदन भण्डारी र मेरोबीचमा गम्भीर ढंगले बैचारिक राजनीतिक छलफल गर्ने भनेर कार्यक्रम तय भएपछि कमरेड मदन भण्डारीको अवसान भयो । दुर्घटना भयो हत्या भयो । मेरो जीवनमा सबैभन्दा दुःखको र अफशोचको क्षण भनेको त्यही भयो । जेठ ११ गते हामी दुईजना रातभरि बसेर पार्टी एकता हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बारेमा कुरा गर्ने मिति तय भएको थियो । बस्ने घर र खाने कुरा तय भएको थियो । तर, जेठ ३ गते नै कमरेड मदन भण्डारीको हत्यापछि कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन दिशामा जाँदै थियो, ०४८ सालपछिको परिस्थिति चाहिँ बिग्रियो ।
लेनिनले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, नेताहरुले सही समयमा सही निर्णय लिए भने इतिहास पचास सय वर्ष वर ल्याउन सकिन्छ । नेताहरुले सही समयमा सही निर्णय लिन सकेनन् भने इतिहास पचास सय वर्ष ढीलो हुन्छ भन्नुभएको छ । मलाई अहिले के लाग्छ भने कमरेड मदन र मेरोबीचमा त्योबेला गम्भीर ढंगले पार्टी एकताबारे छलफल भएको भए के हुन्थ्यो होला त ? हामी दुबै युवाहरु आफ्नो सक्रियता र आफ्नो त्यागका कारणले नेतृत्वमा आइपुगेका थियौं । देशमा केही नयाँ चिज गरौं भन्ने जोस हामीमा भरपुर थियो । त्यतिबेलै कुरा गर्न पाएको भए के हुन्थ्यो होला ?
हिसाब तपाईहरु गर्नुहोला, माधव नेपालजी महासचिव र म अध्यक्ष भएका बेला भर्खर शान्ति प्रक्रियामा हुँदाका बेला ५०/५० मा तालमेल गरेको भए पार्टी एकता त्यतिबेलै भइसक्थ्यो । तर, ५०/५० को कुरा त्यो मिलेन । त्यो पनि नेतृत्वकै कारणले हो । अहिलेचाहिँ फेरि घुम्दै फिर्दै यति धेरै संघर्ष, रुपान्तरण र बहसपछि प्रदेश र संघको निर्वाचनमा हामी मिल्यौं । कमरेड केपी ओली पार्टीको अध्यक्ष र म पनि अर्को पार्टीको अध्यक्ष । हामी दुबै संघर्ष गर्दा पनि बेफिक्री संघर्ष गर्‍यौं, मिल्ने भन्दा पनि झ्याप्पै मिल्यौं । यो हो डाइलेक्टिस । नेता भनेको यस्तो हुन्छ क्या ! मौकामा हिरा फोर्न सक्नुपर्‍यो नि । नेताले निर्णय गर्न सक्नुपर्छ, त्यो भयो । र, त्यो निर्णय सही थियो भन्ने दुबैतिरका आम कार्यकर्ता र जनताले अनुमोदन गरिदियो निर्वाचनमार्फत ।
हामी पार्टी एकताको त्यो ठाउँमा आइपुग्यौं र मलाई गर्व छ । म तपाई अगुवा कार्यकर्ता कमरेडसँग भन्न चाहान्छु, मलाई गर्व छ । मैले कमरेड मदन भण्डारीको निधन भएकै दिन (जेठ ३ गते) पार्टी एकता गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेँ र कमरेड केपी ओलीले ताली ठोकेर त्यसलाई समर्थन गर्नुभयो अनि जेठ ३ गते पार्टी एकता भयो । मलाई के लाग्छ भने कमरेड मदन भण्डारीप्रतिको यो ऐतिहासिक सम्मान हो र मैले त्यो बेला मदन भण्डारीसँग कुरा गरेर पार्टी एकतातिर लैजान सकिन्छ कि भनेको तर थाति रहेको कार्यभार पनि पूरा गरेँ । ०५० सालमा शुरु गरेको त्यो अभियान अहिले पूरा भएको छ ।
अहिले हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौं । हाम्रो जिम्मेवारी राष्ट्रियमात्र छैन । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक बनाएरमात्र यो देशमा सम्बृद्धि र स्थिरता हुन सक्छ भन्ने जिम्मेवारी पूरा गर्दैछौं । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नाराभित्र केन्दि्रत भएर हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्न खोजेका छौं । हामीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक भएको अवस्थामा नेपालबाट आक्रामक ढंगले जाने र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई योगदान गर्ने ऐतिहासिक अवसरको रुपमा पनि यसलाई लिएका छौं । यो देशभित्रको मात्र सामान्य घटना होइन । हामी अन्तरराष्ट्रवादी हुनुको नाताले हाम्रो ऐतिहासिक दायित्व पनि हो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरण ।
अस्ति बुटवलमा यस्तै कार्यक्रममा भनेको थिएँ मैले, १४ वर्ष काराबासमा केपी ओलीजी बस्नुभयो । उहाँको १४ वर्ष काराबास बसेको मनोविज्ञान पनि छ । १४ वर्ष म पनि वनवास बसेँ । मेरो पनि मनोविज्ञान छ । यो १४ वर्षको काराबास र वनबासले हामीलाई यो ठाउँमा ल्याएको छ । ऐन नियम कानुन मिल्दैन हजुर भन्दाभन्दै आन्दोलनबाट आएका नेताहरुको दिमाग खराब गर्ने काम तिनै कर्मचारीले गर्छन् । केही वर्षको संगतपछि त नेता नै कर्मचारी जस्तो भएर निस्किन्छ।
अब मैले भनेँ भने यहाँ म भावुक हुँदै जान बेर छैन । कति धेरै अप्ठेरा र घेराबन्दीबाट संविधान बनाइयो । निर्वाचन पनि कसरी सम्पन्न गरियो भन्ने हामीलाई थाहा छ । हाम्रो एकतामा कति ठूलो ताकत रहेछ । हामीले एउटै पार्टी बनाउने भन्नेवित्तिकै लौ नेपालमा अधिनायकवादको शुरु भयो भनेर कम प्रचार भएको हो ? अब यो देशमा रुन पनि पाइँदैन, हाँस्न पनि पाइँदैन भनेका होइनन् ? किनभने उनीहरुले रुवाएर राखेकाले अब हाँस्न नपाउने भए भनेका हुन् । जतिसुकै हल्ला गरिए पनि जनताले हामीलाई भरोसा गरे र झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिए । अब अहिले पार्टी एकता खोई तलसम्म गर्न सकेको भन्दैछन् ।
महासचिव र म हलगोरु, अब ठूलो अभियान आउँछ
प्रतिक्रियावादीहरुले नेकपाको एकता तलसम्म हुँदैन भन्न थालेका छन् । पहिला पहिला संविधान गणतन्त्र हुँदैन भनेजस्तै यो पार्टी एकता पनि हुँदैन भन्दैछन् । सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन भनेर प्रचार गरेका छन् । कमरेड महासचिवले राम्रोसँग भन्नुभयो । महासचिव र मेरो भाषा बिस्तारै बिस्तारै मिल्न थालेको छ । कुरा बुझ्नुस है, हामी हलगोरु जस्तो हुन थालिएको छ क्या ! सबै ठाउँमा सँगै गएर एकले अर्काको भाषा सुन्दा-सुन्दा एउटै भाषा हुन थालेको छ ।
हामीले भनेका छौं, यो पार्टी एकता सफलताको साथ तलसम्म सम्पन्न हुन्छ । त्यो पनि छिटै । बिभिन्न कार्यदलका सुझालाई अन्तिम रुप दिएर सचिवालय र स्थायी समितिमा पेश गर्नका लागि कमरेड महासचिवकै नेतृत्वमा अर्को कमरेड समेतको टिम बनेको छ । हिजो बिहानमात्र मेरो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भयो । आज बिहानमात्रै मेरो कमरेड माधव नेपालजीसँग पनि कुरा भयो । हामीले अब छिटोभन्दा छिटो तलसम्म एकता टुंग्याउनुपर्छ र एउटा अभियानको रुपमा देशभरि जानुपर्छ भनिएको छ । कमरेडहरुलाई बिल्कुल कसैको प्रचारबाट भ्रममा नपर्न म अनुरोध गर्न चाहान्छु । हेर्नुहोला, केही दिनभित्रै पार्टी एकताको सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंगिनेछ ।
लाखौंको संख्यामा युवाहरु हामीसँग छन् । संघर्षका सबैखाले रुपहरुको अनुभव भएको एउटा विशाल फौज हामीसँग छ । हामीले पार्टी एकतालाई टुंग्याएर अभियानका रुपमा हामी गइसकेपछि प्रतिक्रियावादीहरुले हाम्रो विरुद्ध गर्ने गरेका दुश्प्रचारहरु हामी एउटै योजना र अभियानबाट धूलोपीठो पार्न सक्छौं । यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु । हामीले त्यसो गर्नैपर्छ हामीसँग अर्को कुनै विकल्प छैन । हामी त्यही बाटोमा जानैपर्छ र जान्छौं । हामीलाई थाहा छ, हिजो कति ठूला घेरा र षडयन्त्र तोडेर यहाँसम्म आइपुगेका छौं । अहिले भइरहेका दुश्प्रचारहरु त हाम्रा लागि दूधभात नै हो, मज्जाले पचाउँछौं ।
सरकारको कुरा पनि आएको छ । हाम्रो यहाँ समस्या के छ भने, रणनीतिक कामहरु गर्‍यो भने तत्कालीन काम छुट्ने । तत्कालीन काम गर्‍यो भने रणनीतिक काम छुट्ने र एकांगी हुने खतरा हामीले भोग्दै आएका छौं । हामीकहाँ लडाइ जनताले र पार्टीले गर्छन् र त्यो आन्दोलन रोक्नको लागि पूरानो नेतृत्वको बलमा पूरानेा संरचनाले असहयोग गर्छ । सात सालमा राणा शाहीको विरुद्ध चलेको आन्दोलन दबाउनका लागि उनीहरुको प्रशासनले आन्दोलनकारीमाथि सकेको दमन गर्न खोजेकै हो । ०४६ मा आन्दोलनकारीमाथि राजाको प्रशासनले रोक्न बल गरेकै हो । यही कुरा पछि पनि भएकै हो । परिवर्तन कार्यन्वयन गर्ने बेला पुराना कर्मचारीतन्त्रका हाकिमहरु बदलिएनन् ।
योपटक हाम्रो कमरेड केपी ओलीसँग मेरो लगातार कुरा हुने गर्छ । कमरेड माधव नेपाललगायत उहाँको टिमसँग पनि मेरो कुरा हुने गर्छ । अहिले त हामीले खाली सामान्य राजनीतिक परिवर्तन गरेकोमात्र होइन, सिस्टम परिवर्तन गरेको हो । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता जस्ता कुरा सामान्य राजनीतिक हेरफेरमात्र होइनन् ।
हामीले नयाँ ढंगको पार्टी बनाउने हो । यहीखालको प्रतिस्पर्धाबाट जनताको मन जितेर समाजवाद ल्याउने हो । हामीले हिजोको रसियाको मोडल पनि अब काम गर्नेवाला छैन । चाइनिज मोडलको नक्कल गरेर पनि हुनेवाला छैन । नेपाली मोडेलको विकास गर्नुपर्ने छ । यसमा हामी धेरै केन्दि्रत हुनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने यो पार्टी महान हुनेवाला छ । ममाथि कतिपयले भन्छन्, प्रचण्ड अस्थिर छ । अस्थिर मान्छेले कहाँ हान्छ थाहा छैन पनि भन्छन् । यसो होइन, म एकदम सोझो मान्छे हो वास्तवमा । गर्दागर्दै कस्तो भइदियो भने..म कुनै बहकाबमा छैन भन्न खोजेको हो ।
(नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबार बिराटनगरमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)